RASMI: Damiano Tommasi oo u sharraxan madaxwaynenimada xiriirka Talyaaniga FIGC – Gool FM
RASMI: Damiano Tommasi oo u sharraxan madaxwaynenimada xiriirka Talyaaniga FIGC
Raage January 5, 2018
(Roma) 05 Jannaayo 2017 – Damiano Tommasi ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u taagan yahay guddoomiyenimada xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ee FIGC.
Ninkan oo haatan ah madaxa iskaashatada laacibiinta ayay dad badani u arkaan hoggaamiye casri ah oo ku habboon kacaaminta ciyaarta Talyaaniga kaddib fashilkii uu isla casiley Carlo Tavecchio, wuxuuna haatan ku dhawaaqay go’aanka musharraxnimadiisa.
“Waa inuu yimaaddaa rabitaan khuseeya inuu isbeddel dhoco. Taas ayaanba aniga igu khasbeeysa inaad diyaar noqdo, waxaa loo baahan yahay in loo midoobo dhismaha afkaaro horusocod ah…Haddii kale mar kale ayaannu fashilmaynaa”.
''Theo Walcott wuxuu jeclaan lahaa inuu ka dheelo Serie A''
FIORENTINA VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!